Ibidda Amaazoon: Maakroon manni keenya gubachaa jira jechuun akeekkachiisan - BBC News Afaan Oromoo
Ibidda Amaazoon: Maakroon manni keenya gubachaa jira jechuun akeekkachiisan
Pirezedantiin Faraansaayii Imaanu'eel Maakiroon Amaazoon irra deddeebiin gubachuun "rakkina idila-addunyaati," jedhan. Ajandaa garee biyyoota 7 qabu G7 ijoo akka ta'uu qabuus kaasan.
"Manni keenya gubachaa jira," jechuun toora tiwitaraarratti barreessaan.
Pirezedantiin Biraazil Jeer Boolsonaroon dhimma kana Maakiroon kaasuun garuu "bu'aa siyaasaa" argachuuf jechuun deebii kennan.
Walgahii garee biyyoota 7 Biraazil irratti hin hirmaanneerratti mariyannaa jechuun, "ilaalcha koloneeffattoota bakkasaa hin jirretti deebisuuf," jechuun qeeqan.
Waamicha ijibbaataa 'balaa jijjiirama qilleensaa' hambisuuf
Ragaan saatalayiitii jaarmiyaa qorannoo 'National Institute for Space Research' jedhamuun maxxanfame bosonni kun gubachuuun harka 85 'n dabaluu agarsiise.
Quuqamtoonni kunuunsa naannoo bulchiinsi mootummaa Mr. Bolsonaroo namoota gudeelchatti muranii fi qonnaan bultoonni akka ciraanii balleessan jajjabeessuu jechuun balaaleffachuun rakkoo bosona kanarraa qaqqabeef qeequ.
Mr. Bolsonaroon dhaabbileen mitimootummaa bosona kana gubuu akka eegalanii himuun garuu himaannaa kanaaf ragaa akka hin qabne amananiiru.
Kaleessaa yaada kennaniin qonnaan bultootni tarii ibiddaa naannichatti qabsiisuu akka hin oolle dubbachuusaanis Rooyiters gabaaseera.
Amaazoon addunyaarratti bosona ho'aa jiidha guddicha amma Kaarboonii kuusuun saffisa ho'ii addunyaa ittiin dabaluu xiqqeessa.
Hooggantoonni maal jedhan?
Mr.Maakiroon yaa'ii garee biyyoota dinagdeen badhaadhan G7 simatan dhimmii Amaazoon dhimma idila addunyaa ta'uu akeekkachisan.
'' Bosonni Amaazoon ooksijiinii addunyaa harkaa 20 oomishuun sombi addunyaa gubachaa jiraa''' jechuudhaan toora tiwitaraa irratti barrressan. Gareen biyyoota 7 dhimma muddamaa guyyoota lamaan kana irrattii haa mariyannuu jedhamn.
Mr. Bolsaroon Maakiroon dhimma kana kaasuun '' bu'aa siyaasaa dhuunfaa 'argachuufi jechuun himatan.
Dhimmicharratti mariyachuuf fedha akka qaban ibsuun '' walkabajaa fi odeeffannoo sirrii irratti hundaa'uu qaba jedhan. Haa ta'u malee walgahii garee biyyoota 7 irratti kan jedhame qeeqan.
''Pirezedantii Faraansaayii dhimma Amaazoon biyyootni naannichaa yaaa'icharatti otoo hin hirmaatiin garee biyyoota 7 irratti mariyanna jechuun
ilaalcha kolonummaa iddoo isaa gadhiisee , jaarraa 21ffaa keessaa dhimmi akkasii bakka hin qabuu '' jechuudhaan toora miidiyaa hawaasaarratti barreessan.
Bareessaa Olaanaan Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii Antooniyoo Guutereez dhimmichi akka isaan yaaddessu dubbatan
'' Gubachuun isaa baayee yaaadeessaadha'' jedhan.
''Rakkoon qiilleensa baramaa addunyaa wayita mudate kanatti madda oksijiinii fi sirnaakkoo addunyaa baduu hin qabu . Amaazoon eegamuu qabaa jechuun toora tiwitaraarrattti barreessan.
Maaltu ibidda kaase?
Ibiddi waqtii goginsi jirutti Biraazil keessaatti ni mudata garuu itti yaadamee seeraan ala bosona lafa dheedumsa horiif ciramu jira.
"Goginsi ibiddi akka hammaatu fi tamsa'uuf haala mijeessa, garuu ibidda jalqaba namatu qabsiisa itti yaadamees ta'ee balaa tasaas yoo ta'e jedhan qorataan jaarmiyaa 'National Institute for Space Research'Albetoo Sitzer Rooyitarsitti wayita himan.
Richaadoo Meeloo Dursaan World Wide Fund for Nature (WWF) sagantaa Amaazoon akka jedhanitti'' ibiddaan gubachuun kun bu'aa cirama bosonaa dabalaa dhufe mul'isa ''jedhan.
Biraazil: Godambaan biyyaalessaa ganna 200 balaa ibiddaaf saaxilame
Pireezidant Makroon kateedraalii Noteer Daam ibiddaan miidhame ni ijaarra jedhan
Viidiyoo Biraaziil: Nama balaa namoota 121 ajjeesee jalaa oole